ယူကေနိုင်ငံဟာ G7 ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုအသုံးချပြီး သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ #တရုတ်ပြည်ကိုစိန်ခေါ်ဆိုင်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်မယ် - Yangon Nation News
🇬🇧 ယူကေနိုင်ငံဟာ G7 ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုအသုံးချပြီး သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ #တရုတ်ပြည်ကိုစိန်ခေါ်ဆိုင်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်မယ်။
📰 The Telegraph သတင်းစာကြီးရဲ့အဆိုအရ “🇨🇳 တရုတ်ပြည်ဟာ တကမ္ဘာလုံး အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်တွေမှာ ဒေါ်လာသန်းထရီလျံနဲ့ချီသုံးစွဲပြီး ဒီမိုကရေစီအရေးကနေသွေဖယ်စေမယ့် လက်ဦးမှုခြေလှမ်းတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
China’s multi-trillion dollar infrastructure spending spree across the globe, potentially setting up an alternative system for democracies to seize the initiative.
ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီး Belt and Road Initiative (BRI) ဟာ အဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ရဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကိုခေတ်သစ်ကျွန်ပြုရေးဗျူဟာတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်။
သီရိလင်္ကာဟာဆိုရင် တရုတ်ပြည်ရဲ့အကြွေးကိုပြန်မဆပ်နိုင်လို့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာအချက်အချာကျပြီးအရေးပါတဲ့ဆိပ်ကမ်းကို တရုတ်လက်ကိုထိုးအပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ခေတ်သစ်ချစ်တီးလုပ်ရပ်အနေနဲ့ ကြွေးကိုတပြုံးပြုံးချပေးပြီး သိမ်းယူစရာရှိရင်မျက်နှာမနာပဲသိမ်းယူတတ်ပါတယ်။
ချေးယူထားတဲ့အစိုးရတွေဟာ အတိုးကြီးကြီးနဲ့လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်ဖြစ်နေပြီး ပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့အခါမှာ အလိုလိုတရုတ်ဩဇာအာဏာအောက်ကို ကျရောက်သွားပါတော့တယ်။
အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က ယူကေဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆန်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လကဖုန်းပြောရာမှာ ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကို အဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့နွံမနစ်အောင် ကူညီဆွဲထုတ်ပေးဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
President Joe Biden proposed the idea onaphone call with Boris Johnson last month, calling for “a similar initiative, pulling from the democratic states, helping those communities around the world that, in fact, need help”.
ယူကေနိုင်ငံက G7ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတာမို့ ဒီအရေးကိုဦးဆောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ G7 အကြောင်းကိုအားလုံးသိအောင် နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်။
G7ဟာ အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီနဲ့ ဂျပန်တို့ပါဝင်တဲ့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး ခုနှစ်နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဥရောပသမဂ္ဂပါပူးတွဲပြီး G7 အစည်းအဝေးတက်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ G7 ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဟာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၃၁၇ ထရီလျံရှိပြီး ကမ္ဘာ့ချမ်းသာမှုရဲ့ ၅၈ % ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ GDP ရဲ့ ၄၆ % ရှိပြီး global purchasing power parity မှာ ၃၂ % ရှိပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ကို G7 ထဲဘာလို့မထည့်တာလဲဆိုရင် တရုတ်ဟာကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်ပေမယ့် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေမှာနည်းပါးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ G7 သာတကယ်ညီရင်တရုတ်ကိုကိုင်လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ဟာ ကမ္ဘာ့ချမ်းသာမှုရဲ့ ၁၆•၄% ပဲချမ်းသာတာပါ။
ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့ ယူကေနိုင်ငံတို့က G7 ကိုညီညွတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ဟာ BRI ကိုလက်ဦးမှုခြေလှမ်းယူနေရာမှာ အခြေခံစီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွေကို တရုတ်ပိုင်အဖြစ်တည်ဆောက်ရေးသာမက တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ စစ်ရေးအတွက်ပါထည့်သွင်းကြံစည်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကိုပါ ပို့ကုန်အဖြစ်တင်ပို့ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Think Tank Civitas မှ Radomir Tylecote ကဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာ နေရာခြေကုပ်ယူထားပြီး စစ်ရေးအရလိုအပ်ရင် ဆိပ်ကမ်းတွေကို သူချက်ခြင်းအသုံးချနိုင်အောင်ကြံထားပုံရပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံမှာလည်းတက္ကသိုလ်တွေကို အထောက်အပံ့ပရောဂျက်တွေပေးပြီး အဲ့ဒီအထောက်အပံ့တွေမှာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ တရုတ်စစ်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေပါနေပါသတဲ့။
Heritage Institute မှ James Carafano ကပြောဆိုရာမှာ …
တရုတ်ရဲ့ ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမကြီး BRI ဟာ မတည်ငြိမ်မှုတွေကိုဆောင်ကြဉ်းလာလိမ့်မယ်။
တရုတ်ပြည်ဟာ အကြွေးနဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုဆင်းရဲမွဲတေအောင်လုပ်နေတယ်။ သယံဇာတတွေကိုအေးဓားပြတိုက်နေတယ်။ ပထဝီနိုင်ငံရေးအရလွှမ်းမိုးမှုကိုရယူနေတယ်။
“We should work together to counter that, but how we counter that is what really matters.
အမေရိကန်၊ ယူကေနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေလုပ်နိုင်တာအများကြီးပါ။ ကျနော်တို့စားပွဲပေါ်တင်ဆွေးနွေးရမယ့် “အင်အားကြီးမားမှု” ဟာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။
There isalot that the US, UK and Europe can do. The big force we have to bring to the table is the private sector.”
ကျနော်တို့အခုလို ရင်ဆိုင်တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရာမှာ အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ တရုတ်ပြည်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေတုန့်နှေးသွားစေမှာတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
အမေရိကန်နဲ့ကျန် G7 နိုင်ငံတွေကတရုတ်လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်လုပ်မှာမဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကိုစီးပွားဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ် မက်လုံးပေးကာ infrastructure အခြေခံအဆောက်အအုံတွေစွတ်ဆောက်ခိုင်းခြင်းဟာ အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအတွက် ရေရှည်အကျိုးစီးပွားမဖြစ်စေပဲ အကြွေးနွံနစ်မယ့်အန္တရာယ်သာရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် well-governed private sector projects သေချာစီမံထိန်းချုပ်မှုရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပရောဂျက်တွေမှာ ငွေကြေးမြှုပ်နှံအားပေးခြင်းဟာသာလျှင် ရေရှည်စီးပွားတိုးတက်စေပြီး တရုတ်ငွေပူကိုရှောင်မယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖွံဖြိုးစဲနိုင်ငံတွေက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေတိုးတက်လာမှ တရုတ်ပြည်နဲ့အပြိုင်ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း။